Nri na nsen
N'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ nnọọ ihe na-adọrọ adọrọ ka "ịnọdụ" na nri dị iche iche dị iche iche, ma ugbu a, ihe oriri na àkwá dị nnọọ mma. "Ụdị ihe oriri na-edozi ahụ" nwere ọtụtụ uru - ọ dịịrị onye ọ bụla, anụ ahụ na-enwetakwa ọtụtụ ihe bara uru nke dị ya mkpa nke ukwuu, ọ naghị egbochi agụụ nke agụụ, ọ bụkwa site na nke a ka ndị na-atụfu ihe dị arọ na ụkọ nri na-ata ahụhụ. Osisi - ngwaahịa a bara ezigbo uru, ya mere mmetụta nke saturation na-abịa ngwa ngwa ma ruo ogologo oge.
Otú ọ dị, ihe oriri na nsen anụ a nwekwara ihe ndọghachi azụ: ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke àkwá na nri na-emerụ akụrụ na pancreas, ya mere ndị nwere nsogbu na ọrụ nke akụkụ ndị a kwesịrị idalata site n'enyemaka nke nri ndị ọzọ.
Ụkpụrụ nri na ntan anụ na menu
Ụkpụrụ bụ isi - ị ghaghị ịgbasochi nri ahụ, naanị na nke a, ọ ga-ekwe omume wepu 7 kg. maka izu abụọ. I nweghị ike ịṅụ kọfị, nwee nri, ọ bụkwa mmiri na mmiri mmiri na- acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na- ahapụ.
Nri ụtụtụ bụ mgbe niile - ọ bụ ọkara mkpụrụ osisi amịlị na otu àkwá ma ọ bụ abụọ.
N'okpuru ebe a bụ menu maka izu abụọ:
Monday : atọ mkpụrụ n'ehihie, na ọkụkọ mgbede na ụdị esi.
Tuesday : n'ehihie ehihie, salad nke cucumbers, carrots, tomato, maka nri nri nri (ị nwere ike abụọ) na toast.
Wednesday : toast, cheese cheese, salad na tomato maka nri ehihie, anụ na mgbede.
Nke anọ : ato atọ n'ehihie, na mgbede - anụ na salad.
Fraịde : akwụkwọ nri, nsen abụọ n'ehihie, azụ, mkpụrụ vaịn na letus na mgbede.
Saturday : atọ mkpụrụ maka nri ehihie, anụ na akwụkwọ nri na mgbede.
Sunday : anụ, mkpụrụ osisi amị, akwụkwọ nri na n'ehihie, esi nri ma ọ bụ akwụkwọ nri na mgbede.
Monday : salad na anụ n'ehihie, àkwá abụọ, mkpụrụ vaịn, akwụkwọ nri na mgbede.
Ihe nchịkọta na Tuesday bụ ihe yiri nke gara aga.
Wednesday : kukumba na sie anụ n'ehihie, salad akwukwo nri, àkwá abụọ, mkpụrụ vaịn.
Tọzdee : obere cheese, àkwá abụọ, akwụkwọ nri dị ka nri ụbọchị, àkwá abụọ maka nri abalị.
Fraịdee : n'ehihie a na-esi azụ azụ, nsen abụọ na mgbede.
Saturday : anụ, mkpụrụ osisi amị, tomato n'ehihie, akwa na mgbede.
Sunday : ọkụkọ na akwụkwọ nri , mkpụrụ vaịn, tomato - nke a bụ nri abalị na nri abalị.
Enwere ike ghara igbanwe nri na ebe, ma ihe ọzọ maka nri dị otú ahụ nwere ike ịbụ ihe oriri na nsị nchara, ebe kama otu anụ ọkụkọ kwesịrị iburu quail ise.
Ntụziaka maka ihe atụ si Pelagia
Mmiri ara ehi Dairy
Nri dị irè
Olee otú nwa nwanyị Valeria dịruru ná njọ?
Nri nri nke ihe ndi ozo bu nke oma na ihe ojoo
Nri nri na-eri nri na nri rye n'aka nri nutritionist Olga Raz
Ngwakọta Onion - Ntụziaka na chiiz gbazee
Janet Jackson n'eziokwu gosiputara asusu banyere ime ime ya
Bershka akpụkpọ ụkwụ
Yist mgwakota agwa maka yist akọrọ pies
Gynecological anti-inflammatory suppositories - ndepụta
Dehaan Dane ghọrọ nna
Nails na-ese - 96 foto nke mara mma osise eserese na mbọ
Aprịkọt jam na oroma
Apple marmalade maka oyi
Ọnọdụ nke mmepe nwata
Turkey na utoojoo ude ihendori
Ekpere "Ka Chineke bilie"
Ihe ịrịba ama nke ọrịa na nkịta
Ego ole ka ha na-ebi?
Igodo Mgbanaka Silver